Lumay Windows 7 Password - Warbixannada maamulka badiyay Windows 7 password
> Resource > Windows > Sida loo celi Khasaaray Windows 7 Password
Haddii aad badiyay Windows 7 password oo aan haysan maamulaha kale account ama disk dib password, ma waxaad awoodi doontaa inaad hesho your computer iyo dib password ka lumay. Hadii aan lahayn xisaab user kale kombiyuutarka, mar dambe ma aad isticmaali kartaa adiga oo computer aad dib heynayo nidaamka.
Sidaa darteed, sida ugu wanaagsan ee aad computer dhiman oo aad wada xajisaan xogta lagu kaydiyaa it on dhawrsan, waa in a disk dib password iskaa si dib u Windows 7 password laga badiyay . Sidee? Just raac tilmaan-3-tallaabo hoos ku qoran.
Step1. Samee Windows 7 password dib disk
In la abuuro a disk dib password, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in aad doorato barnaamij- in la gubi karaa disk ah Downlaods. Wondershare LiveBoot CD Downlaods / USB waa nooc noocan oo kale ah ee barnaamijka, kaas oo u fasaxaya inaad gasho computer iyo dib u password maamulka badiyay in Windows 7 . Waxaad isticmaali kartaa in Windows 7, Vista ama XP, oo way gubi doonaan galay CD / DVD ama ah drive USB dibadda.
Ka dib markii socda software on your computer, suuqa kala software lagu soo bandhigi doonaa sidii dabagal.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay in aad halkan ku samaynayno waa in riix badhanka gubatay ka dib galinta maran CD / DVD ama USB drive galay kombiyuutarka. Oo markaas waxaad qaadataa ka soo drive disk ama USB markii habka ka baxayo. Waxaa aad u shaqeeyaan. Mid ka mid ah wax aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in aad dooranayso in ay gubi doonaan drive USB ah haddii ay jirto ma aha gubi ah lagu rakibay on your computer, maxaa yeelay drive USB ah gubanaya kama raadsado gubi dheeraad ah.
Step2. Ku qor computer qufulan oo password aad laga badiyay
Halkan waxa aad hadda geli karaa computer qufulan. Geli disk ama USB drive ee khaanada Downlaods aad abuureen galay kombiyuutarka. Ku bilow u riix badhanka F12 si degdeg ah si ay u galaan Boot Device Menu. Waxaad dooran kartaa CD-ROM Drive USB oo guji gala. Markaas waxaad heli menu kabaha soo socda. Dooro "Boot ka LiveBoot" ka dibna waxaad heli doontaa nidaamka qufulan.
Step3. Dib u celi aad badiyay Windows 7 password
Marka faylasha nidaamka si buuxda raran yihiin, waxaad tahay nidaamka hadda, iyo LiveBoot si toos ah waddaa. Halkan waxa aad u baahan tahay in ay doortaan "Password & Key Finder" on interface barnaamijka iyo weeraray on the "Password Admin Resetter" si ay dib ugu password maamulka lumiyay Windows 7 sida maran.
Markaasay bilaabi PC iyo aad u gasho nidaamka sida caadiga ah, waxaad ka heli doontaa in nidaamka kama raadsado sirta ah mar dambe, oo waxaad geli kartaa in la isticmaalo computer sida ka hor.
Haddii aad u socotid dhigay sir ah oo cusub ku Windows 7 computer si looga hortago Helitaanka aan la ogalayn, fadlan hubi in furaha aad u dhigay si fudud u xusuusan si aad markale ma waayi doonaan.